Welcome to Aayaha Nolosha » HAWEEN ILMO AYSAN YEELAN DOONIN DHALA
HAWEEN ILMO AYSAN YEELAN DOONIN DHALA
December 4, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Lamaanayaal doonaya inay helaan ilmo aysan iyagu dhalin ayaa doondoonaya dumar uur u qaada kadibna u dhala ilmo ay kala wareegaan kadib markay dhalaan.
Dumar u dhashay dalka Kanada ayaa ogolaaday inay qaadaan uur ilmo aysan yeelan doonin, waxayna arrintan u sameeyaan si mutadawacnimo ah.
Marissa Muzzell waxa ay foolanaysay muddo 16 saacadood ah si ay u dhasho gabadh ay u qaaday lammaane kale .
Xilligii ay uurka ahayd waxa ay ka soo martay dhibaatooyin badan waxa ayna sheegtay in laba mar isbitaal la geeyay. Muddo bilooyin ah ayey qaadanaysay daawooyin, waxa ayna dhibaatadan oo dhan ay u martay ilma aysan yeelan doonin iyada.
Marissa, waa 32 sano jir ku nool dalka Canada waxa ayna ka mid tahay dumarka dhalo carruurta loo wakiisho.
“Waxan hadda leeyahay qoys… qoys ay leeyihiin dad kale,” ayay tiri Marisa.
Dalka Kanada ayaa waxa ku soo badanaya dhaqankan, waxaana jira baahi weyn oo loo qaba dumarkan sida mutadawacnimada uurka u qaada,, waxaana arrinkan lala xiriiriyay inay dunida ku soo bateen lammaanayaal doonaya in ilmo loo dhalo.
“Waxaan arkay dumar badan oo ku nool dalka Mareykanka oo la siiyay kumanaan doolar si ay ilmo ugu qaadan, halka Kanada aysan samaynin,” ayay tiri Marissa.
Waxa ay u baahan yihiin inay la yimaadaan waraaqo cadaynaya inta uu la egyahay kharashka ay ku heshiiyeen.
“Ma’ahan dhaqaale aad kayd ka dhigan kartid, ma nihin mashiinno soo saara carruurta,” ayay tiri Marissa.
“Ani ahaantayda waxay ii ahayd mid khaas ah. Uma samaynaysid shaqo ahaan, balse naxariiso ayay iga ahayd.”
Dumarkan u dhashay dalka Kanada ee qaada uur aysan iyaga lahayn ayaa waxa ay leeyihiin astaama gaar u ah oo lagu garto.
Ku dhawaad 900 ka mid ah dumarkan, sida ay shaaciyeen warbaahinta dalka Kanada ayaa howshan wada, waxaana la bilaabay 11-sano ka hor.
“Markii aan bilaabay shirkadaan, waxaan lahayn 8 carruur ah oo ku dhasha habkan sanadkiiba, bishii la soo dhaafay kaliya waxaa halkan ku dhashay 30-carruur ah,” ayay tiri Leia Swanberg, oo aasaastay xarunta baarista ee wakaaladda weyn ee ka jirta dalka Kanada.
Ms. Swanberg, haweenaydan oo horay u ahayd dumarka qaada ilmaha, ayaa caawisa inay isku keento waalidiinta doonaya in ilmaha loo qaado iyo kuwa diyaarka u ah inay sameeyan arrinkan.
“Mar walba wey adag tahay, waxaa jira lammaaneyaal badan oo doonaya in ilmo loo qaado kuwaa oo ka badan dumarka shaqadan samaynaya.”
Janet waxa ay dhashay ilmihii ugu horreeyey oo lahaa walidiin ka soo jeeda dalka Faransiiska.
“Waxan xaqiiqdii ku fikirayay inaan laba carruur oo kale aan dhalo, oo aan u qaado lammaanayaashii hore ee lahaa carruurtii aan horay u dhalay” ayay tiri.
“Waxan jeclahay xilliga aan uurka ahay maxaa yeelay jirka ayaan ka dareemaa caafimaad.”
Dumarkan ayaa dhammantood aaminsan in shaqadan ay noloshooda badeshay.
“Ma qiyaasi karo noloshaha carruur la’anta ah, hase yeeshee helitaanka caruurta dumarkan ayaa ah mid aad u adag” ayay tiri Janet iyadoo intaa ku dartay “Aad ayaan u xanuunsaday xilligii aan uurka ahaa, marka seygayga ayaa i caawin jiray. aad ayuuna ii taageeri jiray”.